Uummata nagaa qe’ee isaa irrati ajjeesuu, badii malee hidhuu fi dararuun mootummaa biyya bulchaa jiruun raawwatamaa jiru hattatamaan akka dhaabbattu cimsinee gaafanna.
Dhiittaan mirga dhala namaa akka walii galaatti raawwataa jira jedhamu Qorannoo Walaba qaamota alaan (International Investigators)’iin hattattamaan akka godhamu gaafanna.
Muuxannoo waggoota darbanii irratti hundaahuun humna waraanaan biyya bulchuun balaa malee buhaa hedduu waan hin qabneef naannolee amma haala kanaan bulaa jiranitti olaantummaa seeraa eegsisuuf waraanni waan hin barbaachisneef Komaand Poostiin irraa akka kahu ni gaafanna.
Mootummaan gaagahama amma gahaa jiruun namoota beelaan rakkachuu dandahan, qe’ee isaanii dhiisanii baqatanii fi baqataa jiran akka tumsu ni gaaffanna. Nutis kara kana gahee keenya ni baana.
Rakkoo nagaa qaama hidhateen naannoo kanarra gahaa jira jedhamu yoo jiraate ammas maanguddoo Oromoo waliin qajeellummaa fi tokkummaan keessumaa uummata naannoo mari’achiisuun akka hiikamu gaafanna.
fMootummaan yeroon amma kan cehumsaa akka taheefi aangoo inni amma qabu kan filannoon mirkanaahe akka hin taane hubatee Filannoo fuula dura keenya jiru dirree dimokiraasii ballisee xiyyafannoo guddaan filaannoon kun kan haqaa fi bilisa akka tahuuf irratti hojjetu gaafanna.
Philadelphia, PA & Lancaster, PA.​
Akkuma karaa midiyaalee gara garaa dhagahaa jirru, artiistiin Oromoo beekamaa fi jaalatamaan Haacaaluu Hundeessaa guyyaa har’aa Waxabajjii 29, 2020 magaalaa Finfinnee naannoo galaan kondominiyam jedhamutti wareegameera. Hacaaluun weellisaa qofa otuu hin taane qabsaa’aa goota, bara hamaa keessa dukkanatti ija babaasee saba isaaf sagalee ta’uudhaan qabsoo finiinsa nama turedha. Ajjeechaan gara jabeenyaa qaroo saba keenyaa irratti raawwatame kanaan gadda nutti dhagahame ibsaa, maatii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Tokkummaadhaan kaanee wareegama barbaachisu kafallee gumaa ilma keenya ni baasna. Amma yeroon yeroo itti boohan utuu hin taane, xiiqiidhaan kaanee, tokkuummaan sochoonee, ijaarsaa fi hidhannoo keenya jabeeffannee diina bara dhufaa dabraa ilmaan keenya nujalatti nyaachaa jiru kana hiddaan buqqisuuf sochoonu dha. Ni gaha! Waldaan hawaasa keenyaa walgahii arifaachisaa gama Zoom tiin qopheessinee dhimma kanaa fi haala yeroo Oromiyaan keenya keessa jirtu irratti isin mariisisuuf waamicha ni goona.
Qabsaa’aan ni kufa, qabsoon itti fufa,
Waldaa Hawaasa Oromoo Pennsylvania,
Philadelphia, PA & Lancaster, PA.
Ibsa Ejjennoo Hawaasa Oromoo Peensilvaaniyaa,
​Ajjeefamuu Aartist Hacaaluu Hundeessa
​Haala Yeroo irratti, Amajji 31, 2020